အသည်းရောင်အသားဝါ - အေဗိုင်းရပ်စ်ပိုး - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အသည်းရောင်အသားဝါ – အေဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
စက်တင်ဘာ 27, 2017 Assoc. Prof. Teerha Piratvisuth, M.D.
အသည်းရောင်အသားဝါ – အေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
Picornaviridaeဟုခေါ်သောဗိုင်းရပ်စ်အမျိူးအစားအုပ်စုထဲမှဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်အသည်းရောင်အသားဝါ-အေ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသည်းရောင်အသားဝါဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကြောင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိ သောအသည်းရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ရောဂါလက္ခဏာများခံစားရပုံမပြင်းထန်ခြင်းမှရောဂါဝေဒနာပြင်း ထန် လာ၍ အနည်းဆုံး၂ လကြာရှည်သည်။
ပါဝင်သောရောဂါလက္ခဏာများ (အဆိုပါရောဂါဝေဒနာလက္ခဏာများတွေ ့ရှိချင်တွေ ့ရှိရမည်။)
• မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့် မူးဝေအော့အန်ခြင်း
• ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်း(သို ့) ပင်ပန်းခြင်း
အသက်၆ နှစ်ထက်ငယ်သောကလေးငယ်များတွင် ရောဂါလက္ခဏာများမပြချေ။ ဆယ်ကျော်သက် များနှင့် လူကြီး များသာ အသည်းရောင်ခြင်းရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရသည်။ အခြားသောအကြောင်းတရားများ ကြောင့် နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်းရောဂါ ဝေဒနာခံစားရသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ-အေ ဗိုင်း ရပ်စ် ကူးစက်ခြင်းခံရသောသူများသည် ၄င်းရောဂါဝေဒနာအားအမြဲတမ်းခံနိုင်စွမ်းရည်ရှိသွားသည်။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူမှပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများကိုစားသောက်ခြင်း (သို ့) သေချာမနူးနပ်သေး သောအစာများကို စားသုံးခြင်းကြောင့်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
• အသည်းရောင်အသားဝါ-အေ ဝေဒနာသည်များနှင့်အတူနေထိုင်သူများ
• အသည်းရောင်အသားဝါ-အေ ရောဂါဖြစ်ပွားသောနေရာများသို့ သွားရောက်နေထိုင်ခြင်း
• ကလေးသူငယ်များ (သို ့) စောင့်ရှောက်သူများ
• လူအများနှင့် နေထိုင်သူများ- ယာယီစခန်းများတွင်နေထိုင်သောဒုက္ခသည်များ
• အရက် (သို့) အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ နှင့် အသည်းရောင်အသားဝါ စီရောဂါ ပိုးများကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း နှင့်နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါဝေဒနာသည်များ
• အဆိုပါအသည်းရောင်အသားဝါ- အေဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အစားအစာချက်ပြုတ်မပြင်ဆင်မီ (သို ့) သန် ့စင်ခန်းသွားပြီးလျှင် လက်ကိုစင်ကြယ်စွာဆေးကြောခြင်း။ မစင်များကိုကိုယ်တွင်သောအခါလက်အိတ်ဝတ်ရန်နှင့် လက်ကို စင်ကြယ်စွာဆေးကြောခြင်း
• ၄င်းရောဂါပိုးမကူးစက်ရန်အထိရောက်ဆုံးတားဆီးကာကွယ်ခြင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ – အေ ကာကွယ်ဆေး
• ပထမဦးဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားများ ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ်တွင် စတင်လာ၍်နှစ်ပေါင်း၂၀ခန် ့၄င်းဆေးအာနိသင်ကြာရှည်ခံသည်။
• အသည်းရောင်အသားဝါ-အေရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်သောအသက်၂ နှစ် ထက်ကြီးသောကလေးငယ် များကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သည်။
• ၆ လအကြာနှင့် ၁ နှစ်အကြာတွင် ၃ကြိမ်ထိုးရန်
• အဆိုပါအသည်းရောင်အသားဝါ- အေကာကွယ်ဆေးကိုအခြားကာကွယ်ဆေးများဖြစ်သော ဥပမာ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီကာကွယ်ဆေး၊ မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ဆုံဆိုနာကာကွယ်ဆေး၊ Japanese encephalitis အစရှိသောကာကွယ်ဆေးများဖြင့်တွဲဖက်ထိုးနိုင်သည်။ အဆိုပါရောဂါ ဖြစ်ပွားသောနေရာသို ့သွားရောက်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါက ခရီးမထွက်ခင် ၄ပတ် အလိုကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သည်။
• အသက် ၁၈ နှစ်အောက်: ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို စမ်းသပ်ရန်မလိုအပ်ပေ။
• အသက် ၁၈ နှစ်အထက်: ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားကို စမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုင်းနိုင်ငံရှိအရွယ်ရောက်သူတော်တော်များများ၄င်းရောဂါကူးစက်ခြင်းခံ၍ခုခံအားမြင့်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Immune globulin ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
Immune globulin ဆိုသည်မှာ အစားထိုးကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသည်းရောင်အသားဝါ-အေရောဂါပိုးကို အချိန်တို် အတွင်းသာကာကွယ်ပေးသည်။ Immunoglobulin သည် အသည်းရောင်အသားဝါ အေ ပိုးကာကွယ်ဆေးနှင့်ဓာတ်မတည့်သူများ ထိုးနိုင်သည်ကူးစက်ခံရပြီး ၂ပါတ်အကြာတွင်လည်း ထိုးနှံနိုင်သည်
အသည်းရောင်အသားဝါ - အေဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
User rating: 2.92 out of5with 12 ratings